TCO: Waxaa loo baahan in la abuuro 400 000 oo shaqooyin cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
TCO: Waxaa loo baahan in la abuuro 400 000 oo shaqooyin cusub
La daabacay tisdag 2 juli 2013 kl 11.27
Ururka shaqaalaha maamulku oo loo soo gaabiyo TCO wuxuu ku talinayaa in tobanka sano oo soo socda la abuuro 400000 oo shaqo si loo gaaro barwaaqo iyo shaqo buuxda.
Ururku wuxuu kaloo tirakoob uu la sameeyey xafiiska tirakoobka guud ku soo jeediyey in afar meelood oo meel ay noqdaan shaqooyinka laamaha adeegga bulashada. Ilaa sannadka 2020 waxaa baahi shaqaale ka jiri doontaa goobaha caafimaadka, dugsiyada iyo xannaanada waayeelka iyo carruurta. Waxaana lagu qiyaasayaa in baahidaasi ay kordheyso boqolkiiba 10.
Haddaba si loo gaaro habka shaqo buuxda waxaa loo baahan yahay in wax laga beddelo siyaasiyadda maaliyadda iyo dhaqaalaha. Sidaasna waxaa qaba ururka TCO.
Isbeddeladaan asaasiga ah oo hadda ururku soo bandhigay waxaa looga dan leeyahay in Bangiga Dhexe uu dejiyo hadaf shaqa-abuuris iyo in xadka dhaqaalaha laamaha bulshada wax laga beddelo. Isagoo taas dabaraacaya ayuu madaxa siyaasadda arrimaha bulshada ee ururku Roger Mörtvik hadalkiisa u dhigay sidaan
- Waxaan qabnaa in xadka dhaqaalaha laamaha bulshada dib loo lafaguro oo wax laga beddelo, si ay u suurowdo in dardar la geliyo siyaasadda maaliyadda. Waxaana taas ugu baahanahay sidii aan maaligelin ugu samayn lahayn ka hortagga khatarta ka imaneysa isbeddelka cimilada, iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dalabka dhaqaalaha. Bangiga Dhexe waxaa looga baahan yahay hadaf cusub oo dhammaystir ah iyo in uu isla markaasna qiimeeyo kororka sicirbararka iyadoo la tixgelinayo saamaynta uu yeelan karo shaqa-abuurista.